के हो वंशाणुगत रोग, यो कसरी सर्छ ? (भिडियोसहित) | Hamro Doctor News
By Dr. Nilam Thakur
वंशाणुगत रोग वंशबाटै सर्छ भन्ने छैन । क्रोमोजोममा हुने परिवर्तनले ल्याउने रोगलाई अनुुवांशिक वा वंशाणुगत रोग भनिन्छ । शरीरमा हुने जीनमा खराब देखिए यस्ता रोग देखिने गर्छ । जीनले नै मानिसको स्वरुप बनाउने हुनाले एउटा कुनै जीनमा समस्या आउने बित्तिकै असर देखिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी डाउन सिन्ड्रोमका बिरामी उपचार र परीक्षणका लागि आउने गरेको नोभा इन्टरनेशनल डाइग्नोष्टिककी अनुवांशिक रोग विशेषज्ञ डा. निलम ठाकुर बताउँछिन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय वंशाणुगत रोगको उपचार बढेको छ । थालेसेमिया, हेमोफेलिया र बच्चा धेरै खेर जाने जस्ता समस्या लिएर बिरामीहरु आउने गरेको उनले बताइन ।
यस्ता समस्या कसलाई हुन्छ भनेर एकिन गर्न नसकिने उनको भनाई छ । यस्ता समस्या महिला, पुरुष, बालबालिका सबैमा हुन सक्ने डा. ठाकुर बताउँछिन् । आनुवांशिक रोगहरुको सबै परीक्षण नेपालमै हुने गरेको छ । यो रोग लाग्न नदिन रोकथाम गर्नुपर्छ । रोकथाम भनेकै परीक्षण हो ।
Last modified on 2020-01-27 12:56:33
NOVA INTERNATIONAL DIAGNOSTICS
Bhawani Complex, Thasikhel(Kusunti height), lalitpur